Abamba Ukushisa ibhizinisi: ukuqala kuphi? abamba ukushisa ezolimo uhlelo lwebhizinisi
Ukudala ibhizinisi ngesimo hothouse - lena akukusha. Nokho, lapho inhlangano afanele ibhizinisi "green" kungaletha inzuzo enhle kakhulu. Kanjani ukuqala ibhizinisi abamba ukushisa futhi singakunqoba kanjani izithiyo nazo usomabhizinisi luthela? Kuleli nezinye izinto eziningi uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Cabanga ngokucophelela ngebuhle nebubi
Ngo zokugcina imifino, imifino ezikhulayo ngokushesha kwezinye izifunda isuswe 3-4 izitshalo ngonyaka. Ngakho-ke, i-bhizinisi, eqinisweni, awukwazi akunakunisiza. Noma kunjalo, ngaphezu zinzuzo, has inezici ezithile ezingathandeki. Cabanga labo nabanye ethebuleni.
uqhuba hothouse izinzuzo
Abamba Ukushisa ibhizinisi elula. Zokugcina bazakha ngokushesha. Running ibhizinisi kungenziwa kwezinyanga ezimbalwa
Thengisa umkhiqizo kuyinkinga kakhulu, ezidinga njalo zifunana izimakethe umthengi
Ithuba ukuthi bengathola uxhaso lukahulumeni. Ngokwesibonelo, ukuphathwa Krasnodar esifundeni ngetimali ukusebenzisa ibhizinisi labo emkhakheni wezolimo e inani ku-50%
Seasonality of amanani kanye ezingeni eliphezulu mncintiswano kudinga ukutadisha ngokucophelela ezimakethe zakuleli
Ibhizinisi kungenziwa esisungulwe endaweni encane, kuyadingeka ngaphansi abamba ukushisa. Ngezinye izikhathi 2-3 esingamahektare. Londoloza ngokuqasha ebukhoneni ezweni lakubo noma ukuqasha kukude edolobheni
nyangazonke ugesi namanzi izindleko Decent, kanye ekusetshenzisweni kwazo futhi uxhumano
ukubuya Quick utshalomali (kusukela eminyakeni 1 kuya 2) ihlukanisa yiliphi ibhizinisi abamba ukushisa
Luthela osomabhizinisi kubalulekile isithombe eseduze noma plan of action enesandla ekuphumeleleni kwebhizinisi abamba ukushisa. Kubalulekile ukufunda ngezici eziningi ezihlobene inhlangano hothouse, kodwa kuqala kunazo zonke kubalulekile ukuba banake isinqumo izimpikiswano ezintathu eziyinhloko:
Yini sikhule? Banikezwe izimo zezulu mahle e inombolo encane izifunda, intengo izibikezelo, kuyafaneleka ukutshala imifino kanye namakhambi. Lezi zitshalo kukhona linesizotha kakhulu, asidingi ukunakekelwa okukhulu, ziyozuza wonke ibhizinisi abamba ukushisa. Flowers - kukhethwa ochwepheshe abaningi. Izitshalo ezingavamile izimbali - lena izindawo enenzuzo kakhulu e ibhizinisi abamba ukushisa. Kodwa ibhizinisi imbali uhlale okuyingozi, futhi zibiza. Beginner, imfundamakhwela abamba ukushisa ibhizinisi kusuka ekuqaleni, kutuswa abakuyo phezu oluhlaza (anyanisi, ulethisi, parsley).
Ukuze uthengise? Lona umbuzo ukuthi kumelwe zixazululwe ngaphambi ukwakhiwa noma ukuthengwa greenhouse. Ngaphambi kokuqala noma imuphi umsebenzi kubalulekile ukuqala nge abathengi. Lapho usuke okuqinisekisiwe yokuthengisa amaphuzu kuyodingeka, ngcono, ngoba uma omunye umthengi wholesale uyenqaba ukuthengwa ukhulile, kukhona ke nezinye.
Hlobo abamba supply: ihlobo noma ubusika? Yikuphi izinto futhi kungakanani ukuthenga? Abantu abaningi bakhetha okusheshayo-zokugcina. Okuningi ingashintshwa ngqo ibhizinisi , zokugcina ezimbonini, kodwa abawona ezishibhile. Abanye osomabhizinisi sifisa ukwakha kusuka edayisa izinto, bese ubuyekeze futhi kuhlomisa umnotho njengoba nomholo. Kungakhathaliseki ukuthi kuningi kangakanani uya ukutshala, kungcono uhlelo lokusetshenziswa kwemali kusengaphambili.
Esikhathini abamba ukushisa kukhona imikhakha yebhizinisi ezintathu: ukutshala imifino, izimbali kanye zasemazweni; I-ohlangothini ngalunye has abamba ukushisa lalo. Ngokusho kochwepheshe, imali esiphezulu kuzo ungathola sezulu ngempela ashisayo, kuyinto efiselekayo ukuthi izinga lokushisa ebusika kwakungelona ngezansi -5 degrees. Cold ebusika - kuba ingozi engathi sína ukungenwa ukuze ugweme ke, kuzodingeka okwengeziwe ukutshala ukuthengwa zokwakha zihlale zifudumele. Ukulahlekelwa kusukela ezibandayo zasebusika kuyoba izikhathi eziningi mkhulu kunezinhliziyo izindleko zokuhamba kwezimpahla ezindaweni enyakatho.
osomabhizinisi sifisa ayoyikhetha isiqondiso: yesizini, noma unomphela abamba ukushisa ibhizinisi. Kuphi ukuqala ukuhlela? Uma uya bahlanganyele yokukhula zezitshalo ezokwenza ivumelane evamile ipulazi hothouse. ibhizinisi Standing kusekelwe ezindaweni ezithize ezimbonini nge yindawo evikelwe, nge Ukushisa unyaka wonke futhi izibani.
Ukuze ubale engqondweni yakho zonke izindleko okungaphezulu futhi nokwenza imali okulindeleke, sokucabangela izingozi ezingaba khona kwezezimali kanye nezinye izingqinamba ezibalulekile cishe akunakwenzeka ngaphandle business plan. Kuyasiza lemuka nokurarulula imiraro eziningi ngesikhathi esigabeni sokulungiselela. Kanjani ukuthuthukisa business plan for the eziyinkimbinkimbi abamba ukushisa?
Izingxenye icebo lebhizinisi
Abamba Ukushisa ibhizinisi lisu lingaba ukunikezwa izigaba eziningana. Ucabangela izimo zemvelo kanye sezulu, zonke izici ibhizinisi elithile:
Uhlolojikelele noma isifingqo.
Incazelo imikhiqizo kanye namasevisi.
Ukuhlaziya emakethe futhi umkhakha.
Ukukhiqizwa kwepulani uhlelo yenhlangano.
Lwezezimali kanye nokutshalwa kwezimali uhlelo.
Yini ukubhala uhlelo lwebhizinisi?
Sethula ukulungisiswa enemininingwane yephrojekthi ethebuleni.
Uhlolojikelele noma isifinyezo
Uhlelo lwebhizinisi sihlinzekela kuvulwa hothouse, okuyinto siyofeza ukutshala, ukuvuna nokumaketha okwalandela kwemikhiqizo yezolimo (amakhambi, imifino noma izimbali, njll). Njengoba ifomu wezomthetho SP okwakhethwa. Inzuzo yale fomu accounting lula, kalula izinkokhelo izinkontileka intela ukusikeka. Le phrojekthi uhlolwa baphumelele njengawe endaweni kukhona funa ngempela eqinile imikhiqizo yezolimo
Kule ngxenye, kutuswa ukuchaza zonke izinto ezokwenza zifakwe zokugcina ngokuningiliziwe. Uhlelo lwebhizinisi kufanele ibe incazelo kanye umdwebo lesi sakhiwo imiklamo esizayo futhi ubunjiniyela kuhlelwe nezokuxhumana lobuchwepheshe. Kuyadingeka ukubala ukufunwa Ukushisa, igesi, amanzi. Ngokwesibonelo, isethelwe ukuvula hothouse zokugcina amahlanu, endaweni ingqikithi okuyinto 600 m 2, usayizi zokugcina - 20 x 6 m
Incazelo imikhiqizo kanye nezinsizakalo
Abamba Ukushisa ibhizinisi wadala ukutshala kwemikhiqizo yezolimo kanye nokuqaliswa abathengi lwezeMpilo Usizo. Esigabeni wokulungiselela kutfola uhla esizayo, okuyinto izokwethulwa greenhouse. Ngokuvamile kuba imifino kanye nemifino. Kulesi sigaba kubalulekile ukukhetha indlela kulinywe, wendabuko noma ezintsha, ezifana-we. Esikhathini uhla Ukukhetha kubalulekile ukucabangela le okufunekayo ngqo jikelele umkhakha esifundeni zakho ziyasebenza ngoba lesi sigaba esilandelayo
Ukuhlaziya emakethe futhi umkhakha
Abamba Ukushisa uhlelo lwebhizinisi ngokuvamile ihlanganisa incazelo enemininingwane futhi izici lesifunda zokugcina (oblast, rayon) Market. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile kute kuphumelele wonke indaba ukuthola ezingaba amakhasimende wholesale, ukuhlola amathuba emakethe, ukubika umsebenzi nge Wholesalers. Uhlelo lwebhizinisi izobandakanya abathengi hhayi kuphela ezingaba, kodwa futhi imiqulu nalehleliwe ukuthenga
Ukukhiqizwa kwepulani uhlelo zezikhungo
Ukuthola noma yokuqasha umhlaba.
Kuphethe konke ukuxhumana kudingeka.
Recruitment, uma kunesidingo
Ngaphambi ekuqaleni yonke imisebenzi yebhizinisi inhlangano abamba ukushisa ezidingekayo ukwenza uhlelo lokumaketha. Kufanele sicabangele lokho kuyoba nenani amakhasimende, futhi uma kungenzeka ukusungula izixhumanisi lezisekelo wezolimo, izitolo, nezitolo ezinkulu, izimakethe ukudla nezinye counterparties
uhlelo lwezezimali kanye nokutshalwa kwezimali
Hwebani abamba ukushisa inzuzo? Lo mbuzo kuzosiza ukuphendula uhlelo lwezimali. Ukubala inani kwenzuzo baphule-ngisho iphuzu, kumelwe ugcine irekhodi engenayo oluzayo kanye nezindleko, ukuqonda izici intela zokubala nezinye izinkomba
Ngesisekelo uhlelo lwezimali iyona isibikezelo izimali esizayo kanye nezindleko, ngaphandle leli bhizinisi abamba ukushisa bangaba yimpumelelo. Ngaphezu kwalokho, umqashi okungase kudingeke zenze lezi zinto, ukubala imali lohleliwe futhi langempela, inzuzo net, aphuke-ngisho iphuzu nezinye izinkomba. Ukudala uhlelo kanye olugcinwa kuyoba elula ukwehlukana zonke kubiza wesikhathi esisodwa, variable njó:
izindleko Non-yansukuzonke - kukhona izindleko kuyodingeka ukuba asebenzise isikhathi, ngokuvamile ngendlela efanele usaqala (ukuthengwa zokugcina, imishini, kufanele siziphathele amanzi, ugesi, njll).
izindleko Fixed - ngokuvamile izindleko zenyanga esakhokhwa usomabhizinisi inani elilingana (umhlaba yerenti, abasebenzi amaholo, amanzi, ugesi).
Variable izindleko - izindleko ezingavela ngezikhathi lobehlukene (ukulungisa zokugcina, ukuthengwa umquba, imikhiqizo kaphethiloli (fuel) for the ukulethwa kwezimpahla).
Ngesisekelo ukwaziswa okuningiliziwe izindleko, singakwazi ukubala izindleko ingqikithi inyanga ngayinye futhi unyaka wonke. Kuyasiza lula etafuleni emsebenzini, okuzokwenza ukwaba kwekholomu inyanga ngayinye, futhi ayisizi izinhlobo izindleko.
Kuyaphawuleka ukuthi kwezinye izindawo ukuthola 2-3 izitshalo ngonyaka, futhi kwezinye 4 ngamunye kwezitshalo zokugcina. Ipulani yebhizinisi ikuvumela ukuba umane ukubala izimali esivezwa. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukwazi amanani emakethe futhi imiqulu isivuno ngamunye imitha square. Izimali izovela kuphela emva ukudayiswa kwezilimo ovuthiwe futhi ancike uhlobo lomkhiqizo, intengo yalo emakethe.
Njengoba isibonelo, sikhetha ibhizinisi abamba ukushisa ngo-green. Thina ukwenza ukubala eseduze ngoba anyanisi oluhlaza. Ngesikhathi esitolo, ugongolo umnsalo kufanele ushukunyiswe kuze ruble 30, mayelana izindleko olufanayo 1 kg anyanisi ngasesinqeni. ama Kusukela 100 kuye ku-120 kuhlelwe Tshala greenhouse 1 m 2. Ingatholakala anyanisi 100 kuye ku-120 ngemishayo 1 m 2. Ngakho, 1 m 2 of zokugcina kuzoletha kuze ruble 3000. Khipha kusuka izindleko engenayo kanye inzuzo. Ake sithi, izindleko-isikhathi esisodwa siye incurred kakade. Izindleko asele Ukushisa zokugcina kanye neensetjenziswa, nabanye, ezingafinyelela 1 m ruble 2 500.:
3000 - 500 = 2500 ruble.
Gain 1 m 2 iyanda yi endaweni ingqikithi 150 m 2:
2500 × 150 = 375 ayizinkulungwane. Deda.
Ngemva kukhishwa izintela inzuzo net, ezovela abamba ukushisa elichumayo kanjani, kuzuzisa ukutshala imali yabo, isikhathi nokuzikhandla. Ngakho, nembuyiselo ibhizinisi abamba ukushisa e imifino ezikhulayo ne ukubala efanele kungaba izinyanga ezithile. I njalo zifunana amakhasimende ivumela uhlelo usomabhizinisi enze inzuzo ngonyaka wokuqala wokusebenza, ngakho inzuzo yebhizinisi abamba ukushisa kwamukelekile.
ohlelweni lokutshala izimali
Loluhlelo utshalomali kuhlanganisa scheme of izimali noma izimali zonke izigaba ukuthuthukiswa kwebhizinisi, inani capital kokuqala. Utshalomali lokuqala kuyoba greenhouse. Businessman uthola imibhalo iphrojekthi, futhi wonke inethiwekhi yangaphandle. Kubalulekile ukwazi ukuthi ibiza malini zonke imishini. Kuyadingeka ukwaba izimali ukwakhiwa zokugcina, uxhumano amanethiwekhi (ugesi, amanzi), ukuthengwa imishini nokutshala ezibonakalayo. Lezi ukutshalwa zifakwe okusemgqeni izindleko ezakhiwe usomabhizinisi ukuthola inzuzo yabo yokuqala kusukela zokugcina.
Hlobo luni abamba ukushisa ukukhetha?
Ngaphambi kokuba uthenge abamba ukushisa eyonquma uhlobo yayo. uhlobo zokugcina incike izimo zezulu, uhla futhi ngokucacile komnotho:
Zokugcina uhlobo ehlobo-ukukhanya zilula futhi wafaka kwamahora ambalwa. Lolu hlobo izakhiwo kwakhiwa amahora ambalwa. Summer nguqulo ye zokugcina esetshenziswa ikakhulukazi yisivikelo izimvula ezinamandla kanye izinambuzane.
Zokugcina uhlobo ubusika, kukuvumela kahle elangeni usizo futhi ululondoloze microclimate kunesidingo. Ngakho-ke, aba maningi efanelekayo ukutshalwa kwanoma yisiphi isitshalo, kuhlanganise nezimbali.
Izinto for zokugcina
Ukudala lokushisa efanelekayo isitshalo kuyabiza. Eshibhile Galicia ngeke ukwazi ukugcina lokushisa kwesokudla isikhathi eside. Kubalulekile ukucabanga mayelana kukhethwa ezibonakalayo, ezingashabalala sizosetshenziswa ukwakhiwa yayo. Namuhla ukuthandwa zalezi zinhlobo izinto:
Glass. A isikhathi eside kakhulu, ibhizinisi abamba ukushisa ekhaya yayakhiwe yezinto ophambili kuleli cala samanje - ingilazi. It wasetshenziselwa ukudala abamba ukushisa namakhaza, okungase ngempumelelo ingasetshenziswa kuze ukuwa sekwephuzile. Glass okuhambisa 90% ukukhanya. Kodwa nezinyanga zasebusika, kuyafaneleka, kungakhathaliseki asetshenziswe heater ezengeziwe. I ingilazi has kusimo njengoba brittleness, okushisa aphansi ongabhubhisa kuye. A elicwebezelayo izindleko zizoba kunalokho enkulu. Kule ndaba, okokusebenza ezifanele ukusetshenziswa okwesikhashana.
Polyethylene - bawo nezinto ezasetshenziswa isikhathi eside e eziningi ongakhetha zokugcina. Its inzuzo - amanani aphansi, uma iqhathaniswa nezinye izinto. Nokho, ethile okuphawulekayo bandwidth encane. izitshalo eziningi kuyodingeka imithombo eyengeziwe yokukhanya. A abamba ukushisa kuyadingeka ukuvula sezulu okwamukelekayo izitshalo kuyinto kwelanga. Indaba ine amandla ongaphakeme futhi ongaphakeme ukushisa umthamo, ngakho-ke kufanelekile kuphela ehlobo zokugcina.
ibhizinisi Ikhaya abamba ukushisa ayikwazi wacabanga ngaphandle polycarbonate. Kuyinto umkhiqizo kobuchwepheshe besimanje, izikhathi 250 okuhlala isikhathi eside futhi izikhathi 8 alula kakhulu kunomoya ingilazi. ukushisa umthamo wayo izikhathi eziningana kunakunoma ingilazi kanye polyethylene. Kuphela Polycarbonate kuyinto impahla ekahle zokugcina ebusika. Ukuqinisekisa Ukungena enkulu yokukhanya ivumela abamba ukushisa ophahleni polycarbonate akuyona ezingaphezu kuka 9 mm. Izindonga kungenzeka mkhulu. Lapho ekhetha greenhouse polycarbonate kubalulekile ukwazi ukuthi ikhona ezinhlotsheni ezimbili: okuqinile kanye neselula. A plus enkulu polycarbonate, njengoba kuyintando ocace kakhudlwana futhi kunakwezinye Monolithic. kunconywa ibhizinisi polycarbonate abamba ukushisa.
Abamba Ukushisa - ibhizinisi ukuthi kufanele njalo ukuthuthukisa nokwenza ngcono. mncintiswano High embonini kunciphisa izinga lenzuzo. Kukhona ubuchwepheshe obusha, kodwa ngesikhathi esifanayo okwandisa imishini izindleko. Ngakho-ke, lo somabhizinisi kufanele ukwazi hhayi kuphela uthengise esekhulile futhi beholwa emakethe, ukusebenzisa kabusha futhi sandise ibhizinisi.
Phumula, alinikela Hurghada "Mamluk" - Ihhotela, lapho nesithukuthezi!